Goolhaye Donnarumma oo aad ugu dhow ku biirista PSG & Wargeyska Sky Sports oo daaha ka rogay sanadaha heshiiskiisa iyo mushaharka uu qaadan doono - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 8, 2021 at 10:17 Goolhaye Donnarumma oo aad ugu dhow ku biirista PSG & Wargeyska Sky Sports oo daaha ka rogay sanadaha heshiiskiisa iyo mushaharka uu qaadan doono2021-06-08T10:17:13+02:00 CAYAARAHA
(Milan) 08 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa la sheegay inay aad ugu dhowdahay dhammeystirka saxiixa Goolhaye Gianluigi Donnarumma oo ay bilaash ku heleyso.
Donnarumma ayaa soo gabo-gabeynaya siddeed sano oo uu ka tirsanaa kooxda AC Milan xagaagan kaddib markii kooxda Taliyaaniga ah ay ku guuldarreysatay inay heshiis cusub ka saxiixato xiddigeeda.
22-sano jirkan ayaa qaab bilaash ah ugu biiraya kooxda PSG xagaagan haddii la dhammeystiro heshiiskaas, waxaana kooxda reer France ay saxiixa xiddigan ku garaacday kooxaha Chelsea, Juventus iyo Manchester United.
Sida laga soo xiganayo wargeyska Sky Sports, Paris ayaa qandaraas shan sano ah usoo bandhigtay Donnarumma iyo mushahar dhan 10 milyan oo gini oo u dhiganta 12 milyan oo euro, waxaana qandaraaska uu ku noqonayo goolhayaha PSG uu sidoo kale ku qaadan doonaa gunnooyin la xiriira qaab-ciyaareedkiisa.
Haddii uu dhammeystirmo heshiiska, xiddiga Rosseneri ayaa tijaabada caafimaadka ku mari doona xerada ay tababarka ku sameynayaan xiddigaha xulka qaranka Taliyaaniga ee ku taalla magaalada Coverciano kahor inta uusan bilaaban tartanka qarammada qaaradda Yurub ee Euro 2020 kaasoo la baasan doono 11-ka June.
« Kenya oo u Diyaar Garoobeysa Mowjadda Afaraad ee Xanuunka Covid-19
Ciidamada Danab oo howl-gal qorsheysan ku qabtay xubno ka tirsan AlShabaab »